बार्सिलोनाका निम्ति मेस्सीलाइ बदल्नु रोनाल्डो बदल्नु भन्दा निकै कठिन छ : एन्डरसन् !! - Experience Best News from Nepal
बार्सिलोनाका निम्ति मेस्सीलाइ बदल्नु रोनाल्डो बदल्नु भन्दा निकै कठिन छ : एन्डरसन् !!
गोल नामक अनलाइनको विशेष संवादमा क्याम नाउका पुर्बी खेलाडी एन्डरसनले मेस्सी विश्व फुटबलमा एक मात्रै यस्ता खेलाडी हुन जो खेल आफ्नो बसले जिताउछन्। पुर्बी स्ट्राइकर सन्नी एन्डरसन् भन्छन रोनाल्डोलाई खेलमा उदार गर्न जति कठिन थियो त्यो भन्दा निकै कठिन मेस्सीलाइ बदल्न हुने ब्यक्त गरेका छन्।
सन्नी बार्सिलोना १९९७मा प्रवेश गरेका थिए भने उनले रोनाल्डोलाइ बदल्ने र सन्नीलाइ बार्षाको पूर्ण ब्यबस्थापन तोकिएको थियो तर रोनाल्डोलाइ बदल्न सन्नीले पूर्ण रुपमा सकेनन। रोनाल्डोले बार्सिलोनामा छाडेको छाप अन्य कुनै खेलाडीले नसकेको एन्डरसनले बताए।
मेस्सीलाई समेत रोनाल्डोले छाडेको छापलाइ बदल्नु कठिन रहेको बताउछन।
रोनाल्डो निकै उत्कृस्ट खेलाडी थिए साथै १० नम्बर जर्सीको प्रभाब मेस्सीले छाडिसके पश्चात समेत रोनाल्डोको छाप दोर्याउन नसक्ने दाबी गरे।
सन्नी एन्डरसनले भने: “बार्सिलोना म रोनाल्डोलाइ बदल्न आएको थिइन्, मेरो निम्ति रोनाल्डो बदल्नु निकै कठिन काम थियो भने मेरो बेलामा भएका प्रशिक्षक हाम्रो निम्ति धेरै गोल गर्नका निम्ति अग्रसर थिएनन्”!
उनले भने मेस्सीले १०० प्रतिसत हर खेल जिताउन सक्छन त्यसैले पनि भल्भार्डेले मेस्सीलाइ त्यही अनुरुप अगाडी लग्दै छन् साथै मेस्सीले उत्कृस्ट पदर्शन गरेको हेर्ने समेत उनको चाहना रहेको बताए। बार्सिलोनामा निकै ठुलो बज्र पर्ने छ यदी मेस्सी बार्सिलोनामा हुदैनन् भने।
२० बर्ष अगी रहेको बार्सिलोनाको टिम भन्दा हाल रहेको बार्सिलोनाको टिम निकै बलियो रहको कुरा उनले बताए।
अन्तत उनले बार्सिलोनामा रहेको ११ निकै बलियो छ र संसारकै उत्कृस्ट ११ रहेको बताउदै, आफु र आफ्नो त्यो टिम बलियो रहेको तर हाल रहेको टिम उत्कृस्ट रहेको दाबी गरे।
मेस्सी पछि यी खेलाडी बन्दै छन् बार्सिलोनाका मेरुदण्ड : बार्टोमेउ
इएल क्लासिको: भल्भार्डेले छाने क्लासिको खेल्न १९ खेलाडी, को-को परे सम्भावित ४-३-३ भित्र !!
ला लिगामा मेस्सी पछाडी मड्रिडका करिम बेन्जिमा